Fitsipika roapolo momba ny jiro arintany ...
1. Amin'ny jiro arafitra dia manan-danja toy ny hazavan'ny andro na hazavana voajanahary ny jiro artifisialy. 2. Ny hazavan'ny andro dia azo ampiana amin'ny jiro artifisialy. Ny jiro artifisialy dia tsy vitan'ny famenon'ny tsy fisian'ny hazavan'ny andro, ...
Momba ny mpamily LED
Fampahafantarana ny LED mpamily LED dia fitaovana semiconductor mora tohina miaraka amina toetr'andro ratsy. Noho izany, mila ampiorenana sy arovana izy mandritra ny fizotry ny fampiharana, izay ...
Inona no atao hoe LED?
Nahatakatra ny fahalalana fototra ny olona fa afaka mamokatra hazavana 50 taona lasa ny fitaovana semiconductor. Tamin'ny 1962, Nick Holonyak Jr. an'ny General Electric Company dia namolavola ny fampiharana azo ampiharina voalohany amin'ny jiro hita maso ...
Manome tombony amin'ny Galore ny jiro LED Strip
Nandritra ny taona vitsivitsy lasa izay, ny teknolojia LED dia nitombo tamin'ny taha mahavariana. Ny jiro LED androany dia mahomby kokoa sy mijery voajanahary noho ny teo aloha, ary ny vidin'ny jiro dia miha ambany hatrany isaky ny qua ...
Famatsian-jiro matetika LED
Misy karazany maro ny famatsiana herinaratra LED. Miovaova be ny kalitao sy ny vidin'ny famatsiana herinaratra isan-karazany. Ity koa dia iray amin'ireo singa lehibe manimba ny kalitaon'ny vokatra sy ny vidiny. Ny famatsiana herinaratra LED amin'ny ankapobeny dia mety ...
Fahasamihafana telo eo amin'ny mpanasa rindrina LED ...
Na ny mpanasa lamba amin'ny rindrina LED na ny jiro mafy tarihin'ny LED dia jiro mivantana, izay antsoina hoe jiro mandeha amin'ny indostrian'ny jiro. Na izany aza, matetika ny mpanasa lamba amin'ny rindrina LED dia ampiasaina amin'ny jiro eny ivelany, ary ny taratra mafy LED ...
Momba ny jiro LED
Mifidy ny LED Reflector (2)
Sakana amin'ny fampiasana fitaratra na dia betsaka aza ny tombony izay horesahintsika ato aoriana, misy fatiantoka vitsivitsy amin'ny fampiasana fitaratra ao an-tranonao na ao amin'ny Birao misy anao. Ohatra, ny fifandraisana eo ...
Misafidy ny LED Reflector (1)
Fotoana tsara tokony hiainana sy hiaina amin'ity tontolon'ny maoderina ity ankehitriny satria notsofina teknolojia LED isika ary nahatratra ny helatra an-trano sy birao tamin'ny endrik'ireo Reflector LED Mahefa Lehibe rehetra. Saingy, befo ...
Nitondra Floodlight 30w, Hitany 900w Safo-drano Light, Philips 3030 Hitany Safo-drano Light, Led Tri-Proof Light Fixt , Garden Safo-drano Light, Hitany Portable Safo-drano Light,